ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက် ငွေစာရင်း(သတ္တိရှိတဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြီးအတွက်လှူဒါန်းကြသူများ) | dawnmanhon
ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက် ငွေစာရင်း(သတ္တိရှိတဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြီးအတွက်လှူဒါန်းကြသူများ)
သိန်းသုံးရာ နှစ်ဆယ့်သုံးသိန်း ခုနှစ်သောင်းပါ
ဧရာဝတီဘဏ်ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်မှ သိန်း ၁၀၀ အပါအဝင် ကိုနေဝင်း မိသားစုအတွက် မနေ့ညက စ ပြီး ဒီနေ့ နေ့လည် ၂:၁၅ မိနစ်အထိ လက်ခံရရှိထားသော မျှဝေကူညီမှု စုစုပေါင်း စာရင်း - သိန်းပေါင်း သုံးရာ နှစ်ဆယ့် သုံးသိန်း ခုနစ်သောင်း သုံးထောင်ကျပ်တိတိ ( ၃၂,၃၇၃ ,၀၀၀ /- ) ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးတို့......
ငွေလွှဲလာသူအများစုမှာ အမည်မပါသောကြောင့် စေတနာရှင်တဦး ဟုသာ သုံးစွဲလိုက်ရပါကြောင်း နှင့် နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျန်ရှိသောစာရင်းများကို ထပ်ပေါင်းသွားပေးပါမည် ဟုအသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား.........
11. ကိုရူပ - 500,000ကျပ်
12.MNO. - 150,000ကျပ်
19.စေတနာရှင်တစ်ဦး -200,000 ကျပ်
20.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
21.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
22.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ် 23.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 30,000ကျပ်
24.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
25.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
26.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
27.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
28.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
29. MMA. - 100,000 ကျပ်
30.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
31.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000ကျပ်
32.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ် 33.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
34.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
35.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
36.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
37.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
38.Ko Myo Zaw Hein. - 100,000 ကျပ်
39.Ko Htein Lin. - 100,000 ကျပ်
40.Ko Zayzar Min naing- 100,000 ကျပ်
41.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
42.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 15,000 ကျပ်
43.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
44.Ma Mee Eain. - 100,000 ကျပ်
45.KNT. - 150,000 ကျပ်
46. ဦးအောင်ရဲကျော် - 100,000 ကျပ်
47. Dr.ကေခိုင်ဦး - 30,000 ကျပ်
48.မပန်းပွင့်စံ - 500,000 ကျပ်
49.ဦးအောင်နိုင်ဦး - 100,000 ကျပ်
50.ဒေါ်သိန်းသိန်းဆွေ - 75,000 ကျပ်
51. မအိအိခိုင် - 10,000 ကျပ်
52. YGN 15. - 50,000 ကျပ်
53.VO. - 50,000 ကျပ်
54.ကိုဇွဲပိုင်မျိုး - 200,000 ကျပ်
55.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
56. ကိုကျော်ဇင်ထက် - 300,000 ကျပ်
57.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
58.ကိုချမ်းမင်းနိုင် - 100,000 ကျပ်
59.ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် - 500,000 ကျပ်
60.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
61. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
62. Liquor Shwegonedaing 1,2 - 100,000 ကျပ်
63.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 15,000 ကျပ်
64. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
65.ဒေါ်သိဂီင်္ိ - 60,000 ကျပ်
66.စိုင်းမင်းသူနိုင် - 150,000 ကျပ်
67.ဦးကျော်ထွန်း - 100,000 ကျပ်
68. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
69.မချိုချိုအောင် - 50,000 ကျပ်
70.ကိုဖြိုးမင်းမြတ် - 200,000 ကျပ်
71. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 300,000 ကျပ်
72. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
73.ကိုအောင်ဇော်မိုး - 20,000 ကျပ်
74.ဦးတင့်လွင် - 100,000 ကျပ်
75. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
76. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
77. ကိုဟိန်းနေအောင် - 50,000 ကျပ်
78. ကိုနန္ဒကျော်သူဆွေ - 30,000 ကျပ်
79.ကိုစိုးကျော်သူ - 200,000 ကျပ်
80.ကိုသန့်ဇင်ထွန်း - 100,000 ကျပ်
81.USTA+DWK. - 100,000 ကျပ်
82.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 220,000 ကျပ်
83.Dr.မိုးနိုင် - 300,000 ကျပ်
84.Trust-E Commerce- 500,000 ကျပ်
85.ကိုသန့်ဇင်အောင် - 50,000 ကျပ်
86.ရွှေဂဂါင်္ car co.ltd. - 500,000 ကျပ်
87. ကိုမိုးစံ - 100,000 ကျပ်
88.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 5,000 ကျပ်
89.TCL(ESS)Water Supply Proj:- 300,000 ကျပ်
90.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 30,000 ကျပ်
91.စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
92.ဦးကေသူ - 50,000 ကျပ်
93. ZAR ZAR VLA PYAE THU - 100,000 ကျပ်
94. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
95. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
96. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 300,000 ကျပ်
97. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
98. ကိုမြဟန် - 50,000 ကျပ်
99. မသွန်းယုကျော် - 50,000 ကျပ်
100. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
101. မရီရီခိုင် - 200,000 ကျပ်
102. ဦးဥာဏ်လင်း - 30,000 ကျပ်
103. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
104. ဒေါ်ချိုချိုစိန်မောင် - 300,000 ကျပ်
105. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
106. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
107. ဒေါ်သက်မွန်အေး - 100,000 ကျပ်
108. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
109. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 100,000 ကျပ်
110. မစုပိုင်ဆွေ - 10,000 ကျပ်
111. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 100,000 ကျပ်
112. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 50,000 ကျပ်
113. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 50,000 ကျပ်
114. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
115. မခင်မာထွေး - 300,000 ကျပ်
116. ဒေါ်စုစုလွင် - 50,000 ကျပ်
117. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 50,000 ကျပ်
118. ကိုသန့်စင်ထွန်း - 10,000 ကျပ်
119. ဒေါ်သော်သော်အောင် - 50,000 ကျပ်
120. စေတနာရှင်တစ်ဉ်ီး - 20,000 ကျပ်
121. ဦးဇော်ဇော် - 300,000 ကျပ်
122. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
123. ကိုဇာနည်ဟိန်း - 20,000 ကျပ်
124. ဦးအောင်စိုး - 100,000 ကျပ်
125. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
126. ကိုကျော်ညွန့် + မသဉ္ဇာလင်း - 1,000,000 ကျပ်
127. ဦးခင်မောင်သိန်း - 10,000 ကျပ်
128. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
129. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
130. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
131. ဒေါ်မေသူကျော် - 15,000 ကျပ်
132. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
133. ကိုအောင်မျိုးခင် - 100,000 ကျပ်
134. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
135. ကိုဝင်း - 50,000 ကျပ်
136. မစန္ဒာဝင်း - 30,000 ကျပ်
137. မခင်မေဇွန် - 200,000 ကျပ်
138. ကိုဇေယျာစိုးတင် - 100,000 ကျပ်
139. မဝေသက်ခိုင် - 100,000 ကျပ်
140. ကိုမြင့်နောင် - 10,000 ကျပ်
141. ဦးတင်ထွဠ် - 500,000 ကျပ်
142. ဦးဇော်ရဲမောင် - 200,000 ကျပ်
143. ကိုရဲလင်းမြတ် - 50,000 ကျပ်
144. ဦးဝင်းလဲ့အောင် - 100,000 ကျပ်
145. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 30,000 ကျပ်
146. ဒေါ်ရူပါတင် 200,000 ကျပ်
147. ဒေါ်အေးအေးအောင် - 30,000 ကျပ်
148. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
149. မစုစုထွန်း - 50,000. ကျပ်
150. Myanmar Travel & Tour - 150,000 ကျပ်
151. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
152. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 170,000 ကျပ်
153. ကို ZLT - 100,000 ကျပ်
154. ကိုခင်မောင်စိုး - 100,000 ကျပ်
155. ရွိုင်ရွယ်ကင်း - 100,000 ကျပ်
156. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 100,000 ကျပ်
157. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 10,000 ကျပ်
158. ကိုဝင်းသူ - 100,000 ကျပ်
159. ကိုအောင်မင်းသိန်း + မနေနေ - 100,000 ကျပ်
160. Ri Di OHN - 100,000 ကျပ်
161. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
162. ဒေါ်ပပ၀င်းအေး - 50,000 ကျပ်
163. ကိုဇော်ခိုင် - 100,000 ကျပ်
164. ဒေါ်နွယ်ဇင်ဦး - 20,000 ကျပ်
165. မခိုင်ယဉ်ဝေ - 100,000 ကျပ်
166. ဒေါချယ်ရီစိုး - 100,000 ကျပ်
167. ကိုအောင်မျိုးခိုင် - 40,000 ကျပ်
168. ကိုမြင့်စိုးနိုင် - 20,000 ကျပ်
169. ကိုမင်းသက်၊ ကိုဝေဖြိုး - 100,000 ကျပ်
170. မရင်ရင်သူ - 100,000 ကျပ်
171. ဒေါ်ဖြူဖြူထွေး - 50,000 ကျပ်
172. ကိုအောင်ရဲဝင်း - 50,000 ကျပ်
173. Aye Chan May Real Estate - 100,000 ကျပ်
174. ဦးဝင်းမောင် - 40,000 ကျပ်
175. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 30,000 ကျပ်
176. ကိုသက်နိုင်ဦး - 500,000 ကျပ်
177. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
178. ကိုမျိုးမင်းထွန်း - 100,000 ကျပ်
179. မသီသီလှိုင် - 20,000 ကျပ်
180. ဦးအောင်သူဝင်း - 50,000 ကျပ်
181. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 20,000 ကျပ်
182. ဦးကျော်ထွေး - 50,000 ကျပ်
183. Herzfeld Rubinmeyer - 135,000 ကျပ်
184. ဦးခင်မောင် - 100,000 ကျပ်
185. ကိုထွန်းရန်နောင် - 10,000 ကျပ်
186. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
187. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
188. မသစ်သစ်သိန်း - 100,000 ကျပ်
189. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 50,000 ကျပ်
190. ဒေါ်အိဖြိုးခိုင် -100,000 ကျပ်
191. မမြတ်ပန်း - 10,000 ကျပ်
192. စေတနာရှင်တစ်ဦး - 60,000 ကျပ်
193. မ၀င်းသန္တာ - 50,000 ကျပ် နှင့်
AYA Bank ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် သိန်းတရာ တို့ဖြစ်ပါတယ်........
စာရင်းများကို ထုတ်ပြီး အလှူရှင်တဦးချင်းနာမည်ကို စိတ်ရှည်စွာကူးယူပေးသော မမ AC Lay နှင့် ငွေစာရင်း မှား မှန် သေချာစွာပြန်စစ်ပေးကြပါကုန်သော Myo Thet Naing Hein Htet Si Myat Pwint Swann Htetz တို့ကို မွချိ ၂ ကျပ်ခွဲဖိုးတင်ပါတယ်။
Credit - Mg Mg Aye
dawnmanhon: ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက် ငွေစာရင်း(သတ္တိရှိတဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြီးအတွက်လှူဒါန်းကြသူများ)